आराध्या वच्चको ट्रोल गर्ने कोसिसमा महिलालाई अभिषेकले दिए यस्तो जवाफ – Everest Dainik
आराध्या वच्चको ट्रोल गर्ने कोसिसमा महिलालाई अभिषेकले दिए यस्तो जवाफ
मंसिर २० । एक पब्लिक फिगर र कलाकार बन्नुभन्दा पहिले अभिषेक वच्चन एक ६ वर्षकी छोरी आराध्या वच्चनको बुवा हो । जो कोही पनि उनको परिवारलाई लिएर कुनै तरिकाले टिप्पणी गरिरहेको हुन्छ जसलाई ऊ राम्रो तरिका रिप्लाई दिने गर्ने गर्दछ ।
यही मामिला अन्तर्गत हालैमात्र एक महिलाले आराध्याको ट्रोल गर्ने कोसिस गरेकी थिइन् ।
शेरियन पटेदियन नामकी युजरले ४ डिसेम्बर ट्विट गर्दै भनेकी थिइन्– अभिषेत्र वच्चन के तपाईं छोरी अहिलेसम्म स्कूल जाँदिन र ? मैले सोचिरहेकी छु कि यस्तो कुन स्कूल छ जहाँ तपाईंको बच्चालाई आमासँग वा अर्काे कुनै ट्रिपमा जाने आज्ञा दिने गर्दछ । सधैं एक घमण्डी आमाको हातमा हात राखेर । उसको बाल्यकाल सामान्य छैन ।
महिलाको ट्विटमा जवाफ दिँदै भने अभिषेक वच्चनले लेखे– म्याडम जहाँसम्म मलाई थाहा छ कि धेरैजसो स्कूल विकेण्डमा बन्द हुने गर्दछ । यो विकडेजमा स्कूल जाने गर्दछिन् । सायद तपाईं आफ्नो ट्विटको शब्दलाई ध्यान दिन जरुरी छ ।
यसको जवाफमा शेरियनले लेखे– हो स्पेलिङ्ग, जवाफको लागि धन्यवाद ! धेरै मानिसहरुलाई यस्तो लाग्छ तर उनीहरु केही बोल्न हिम्मत गर्दैन ।
सम्बन्धित् समाचार श्रीदेवीको निधनले रानीले आफ्नो जन्मदिन नमनाउने घोषणा गरिन्
सायद तपाईहरु पनि एक सामान्य बच्चालाई लिएर उसको तस्विर पोष्ट गर्नुहुन्छ नकि सधैंभरि आफ्नो आमाको अँगालो घुम्नेवाली ।